तपाईंको अन्तस्करणलाई कसरी प्रशिक्षण दिइएको छ? , विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
बच्चाले "बिस्कुट" चाहान्छ, तर यो कुकी जारबाट टाढा रहन्छ। पछिल्लो मलाकी के भयो भनेर सम्झना गर्दछ जब, सोधे बिना, "बिस्कुट" लिनुभयो। एक किशोरी निर्धारित समय भन्दा पाँच मिनेट पहिले घर आउँदछ किनकि ऊ ढिलो आगमनको लागि माग गर्न चाहँदैन। कर भुक्तानीकर्ताहरूले सुनिश्चित गर्छन् कि तिनीहरूले पूर्ण रूपमा उनीहरूको आम्दानी रिपोर्ट गरेका छन् किनकि उनीहरूले जरिवाना तिर्न चाहँदैनन् जब तिनीहरूको कर फिर्ताको जाँच गरिन्छ। सजायको डरले धेरैलाई गलत काम गर्नबाट जोगाउँदछ।
केही चिन्ता गर्दैनन्, तर तिनीहरूको कार्यहरूलाई तुच्छ ठान्दछन् वा सोच्दछन् कि उनीहरू समात्ने छैनन्। हामीले सबैले सुनेका छौं कि उनीहरूको कार्यले कुनै हानि गर्दैन; त्यसोभए किन खिन्न हुनुभयो?
अरूले सही काम गर्छन्, केवल किनकि यो सहि चीज हो। के कारणले गर्दा कसैको विवेक राम्रोसँग विकसित भएको छ भने कोही मानिस आफूले गरेको कामको नतिजामा धेरै चिन्तित नभएको वा गर्नबाट टाढै बस्छन्? सत्यनिष्ठा कहाँबाट आउँछ?
रोमी २: १ 2,14-१-17 मा, पावलले यहूदीहरू र गैर-यहूदीहरू र उनीहरूको कानूनसँग सम्बन्धित सम्बन्धको बारेमा चर्चा गरे। यहूदीहरू मोशाको व्यवस्थाले डो were्याएका थिए, तर व्यवस्था नभएका केही गैर-यहूदीहरूले व्यवस्थाले चाहेको कुरा स्वाभाविक रूपमा गरे। "उनीहरूको कार्यमा तिनीहरू आफैले कानून थिए"।
तिनीहरूले आफ्नो अन्तस्करणअनुरूप काम गरे। फ्रान्क ई। Gaelelein Expositor बाइबल कमेन्ट्री मा उल्लेख छ (एउटा बाइबल कमेन्ट) अन्तस्करणले "ईश्वर-प्रदान गरिएको मोनिटर" हो। यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि अन्तस्करण वा मोनिटरविना हामी जनावरहरूजस्तो सहज व्यवहार गर्ने छौं। ईन्स्टिन्ट पनि भगवान्‌ले सिर्जना गर्नुभएको हो, तर यसले हामीलाई कानूनको ज्ञान प्रदान गर्दैन। वा गलत।
जब म एक बच्चाको रूपमा अनुचित व्यवहार गर्थें, मेरा आमाबाबुले यो निश्चित गर्नुभयो कि मैले के गरिरहेको छु र मैले त्यसका बारे दोषी महसुस गरें। अपराधले मलाई मेरो अन्तस्करणलाई तिखार्न मद्दत गर्यो। आजसम्म, जब म केहि गलत गर्दछु वा गलत कामको बारेमा सोच्दछु वा गलत सोचाइ राख्छु, म पछुताउँछु र सुन्न कोसिस गर्छु र समस्या सुधार्ने प्रयास गर्छु।
यस्तो देखिन्छ कि आज केही आमाबाबुले दोषीलाई "शिक्षक" को रूपमा प्रयोग गर्दैनन्। Political यो राजनीतिक हिसाबले सही छैन। दोष स्वस्थ छैन। यसले बच्चाको आत्म-सम्मानलाई हानी गर्दछ। हो, गलत प्रकारको दोष हानिकारक हुन सक्छ। तर सहि सुधार, सही र गलत र स्वस्थ पश्चातापको शिक्षा बच्चाहरूलाई निष्ठा-वयस्क वयस्क बन्न आवश्यक छ। विश्वमा प्रत्येक संस्कृतिसँग एक प्रकारको सही र गलत छ र यसको देशको कानून उल्ल .्घन गरेकोमा दण्डहरू लागू गर्दछ। यो दुखद कुरा हो, हृदय विदारक पनि हो कि कति जनाले सत्यनिष्ठा र अन्तस्करणको बारेमा आफ्नो चेतना गुमाउँछन्।
हामीलाई मात्र सत्यनिष्ठ हुन मद्दत गर्ने केवल पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। सत्यनिष्ठा परमेश्वरबाट आउँदछ। संवेदनशील अन्तस्करणको लागि डो grows्याइ बढ्छ जब हामी सुन्छौं र पवित्र आत्माले हामीलाई डो .्याउँछौं। हाम्रा बच्चाहरूलाई सही र गलतबीचको भिन्नता सिकाउनुपर्दछ र परमेश्वरको अन्तस्करण कसरी सुन्ने भनेर देखाउनु पर्छ। हामी सबै सुन्न सिक्नु पर्छ। ईमान्दार, स्वच्छ जीवन बिताउन र एक अर्काको साथ रहनको लागि परमेश्वरले हामीलाई यो निर्मित मनिटर प्रदान गर्नुभयो।
तपाईंको अन्तस्करणलाई कसरी प्रशिक्षण दिइएको छ? - राम्रो पोइन्टमा ग्रिन्ड गरिएको छ वा यसलाई प्रयोग नगरेकोले हो? हामी प्रार्थना गर्छौं कि पवित्र आत्माले सही र गलतको बारेमा हाम्रो जागरूकतालाई तीव्र बनाउँदछ ताकि हामी सत्यनिष्ठ जीवन जीउन सकौं।